Oge Ọgụgụ: 5 nkeji Milan ka Rome Site Train ma ọ bụ Rome na Milan bụ ihe dị mfe na oru oma ahụmahụ. Ọ bụghị banyere mara mma! Inwere ike iwe ụgbọ oloko nke dị ọnụ ala karịa nke ga - ewe oge karịa 3 awa ma na insgbọ oloko si Milan ka Rome-enye gị ohere ima elu anya na…
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Paris na Rome na-na-ahụ n'elu nke fọrọ nke nta ọ bụla njem ịwụ ndepụta. Ndị a ikpọ obodo na-ewu ewu maka na ọdịbendị ha, ụwa-klas nri, enwekwa ije na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Mgbe Rome na Paris bụ ebe dị anya, ha na-nnọọ nke ọma ejikọrọ na ụgbọ okporo ígwè. Nke a pụtara…